Ra'iisul Wasaare Rooble oo ku baaqay shir deg deg ah - Awdinle Online
Ra’iisul Wasaare Rooble oo ku baaqay shir deg deg ah
Ra’iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ku baaqay shir deg deg ah oo xal loogu raadinayo qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho, kadib markii uu kulan la qaatay ururada bulshada rayidka Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in uu la xun yahay wax aka dhacay caasimadda. Ra’iisul wasaare Rooble, ayaa bulshada rayidka uga mahadceliyay dadaalkooda ay ku doonayaan in xal la gaaro, isagoona sidoo kale ku baaqay xabbad joojin iyo in shacabka loo turo.
‘‘Waxay dowladdu diyaar u tahay, in ay kala shaqeyso dhammaan inta nabadda jecel in xaaladda la xakameeyo, oo laga baaqsado colaad iyo burbur ku yimaada dowladnimadeena naga wada dhaxeyso’’, ayuu yiri ra’iisul wasaare Rooble.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ciidamada faray in ay sugaan amniga muwaadiniinta oo aysan ku milmin siyaasadda, ayna ka fogaadaan fal kasta oo wax u dhimaya xasiloonida.
Hadalka Mr Rooble, ayaa imaanaya kadib markii xalay uu dagaal magaalada Muqdisho ku dhex maray hogaamiyeyaasha mucaaradka ugu tunka weyn Soomaaliya iyo askar taageersan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Previous articleTaliyihii Booliska Shibis iyo Ciidamo uu wato oo ku biiray mucaaradka
Next articleGuddoomiyaha Aqalka Sare oo baaq kasoo saaray rabshadaha Muqdisho